युगहरूको विशेषता— कलियुग कहिले अन्त्य भयो अनि अब के आउँदैछ ? | ड्रूपल
युगहरूको विशेषता— कलियुग कहिले अन्त्य भयो अनि अब के आउँदैछ ?
चार युगहरूको विज्ञानबारे विस्तारमा बताउने क्रममा, सद्‌गुरु, हामीलाई भिन्न–भिन्न युगका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ । साथै, कलि युगको समय–अवधिको गणना गर्दै अबको ७० वर्षमा मानव चेतनामा हुने कायापलटको बारेमा समेत बुझाउँदै हुनुहुन्छ ।
यसअघिको ब्लगमा हामीले पूर्वीय संस्कृतिमा गणितको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा १०८ को महत्त्वको बारेमा पनि उल्लेख गरेका थियौँ । यस ब्लगमा विभिन्न युगहरूको विशेषता, तिनको गणितीय विज्ञान साथै मानव प्रणालीसँग तिनको सम्बन्धको बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।
सद्‌गुरु: योगको राशी–चक्रअनुसार सूर्य वरिपरि पृथ्वीले परिक्रमा गर्ने कक्ष (orbit) लाई २७ खण्डहरूमा विभाजित गरिएको छ, जसलाई नक्षत्र भनिन्छ । प्रत्येक नक्षत्रलाई थप चार बराबर भागहरूमा विभाजित गरिएको छ, जसलाई पद भनिन्छ । ४ लाई २७ ले गुणान गर्दा १०८ हुन्छ । एउटा नक्षत्र भनेको चन्द्रमाले पृथ्वी वरपर परिक्रमा गर्ने कक्षको आधा भाग हो । मानव शरीरमा हुने चक्रहरू सोहीअनुरूप सञ्चालित हुन्छन् ।
सत्य युग— मनद्वारा संवाद
त्रेता युग— हेरेर थाहा पाइने
द्वापर युग— सुँघेर थाहा पाइने
कलि युग— मौखिक अभिव्यक्ति
कलि युगको शुरुवात
युग र मानव चेतना
सूर्य र अरू ग्रहहरू भएको हाम्रो सौर्य मण्डल (solar system) आकाशगङ्गा (galaxy) मा घुमिरहेको छ । हाम्रो सौर्य मण्डललाई अर्को विशाल प्रणालीको वरिपरी एउटा चक्र पूरा गर्नको लागि २५,९२० वर्ष लाग्छ । त्यस विशाल तारा वा प्रणालीले यस ग्रहमा पार्ने प्रभावहरू हेर्दा, हामी यो विश्वास गर्न सक्छौँ कि त्यो प्रणाली हाम्रो सौर्य मण्डलको कक्षको केन्द्रमा नभई कतै छेउतिर अवस्थित छ । जब हाम्रो सौर्य मण्डल यस विशाल प्रणालीको नजिक पुग्छ, तब यहाँ रहेका सबै प्राणीहरूमा विशाल सम्भावनाहरू उदय हुन्छ । जब हाम्रो प्रणाली त्यसबाट पर जान्छ, यहाँ रहने प्राणीहरूमा निकै कम सम्भावनाहरू हुन्छन्— यसैलाई हामी कलि युग भन्छौँ ।
सत्य युगमा मानिसमा संवाद गर्ने क्षमता सबैभन्दा उत्तम हुनेछ, किनकि आकाश तत्त्व (ether) एकदमै नजिक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा, पृथ्वीको आकाशिय क्षेत्र एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेको छ । यस्तो कालखण्ड थियो, जब यो निकै टाढा थियो— अहिले यो अलिकति नजिक भएको छ । जब आकाश तत्त्व एकदमै नजिक हुन्छ, त्यसबेला मैले तपाईंलाई केही भन्न चाहेँ भने, मैले बोलिरहनु पर्दैन । यहाँ सम्म कि मेरा आँखा बन्द रहँदा पनि मैले के भन्न चाहिरहेको छु भनेर तपाईंले जान्नुहुनेछ । तर, जब आकाश तत्त्व अलिकति पर जान्छ— भलै, यो निश्चित दुरीमा भएपनि— यदि मैले आँखा बन्द गरेँ भने, तपाईंले केही जान्नुहुने छैन । तर, यदि मैले आँखा खोलेर तपाईंलाई हेरेँ भने, मैले भन्न चाहेको कुरा तपाईंले सजिलै बुझ्नुहुनेछ ।
आकाश तत्त्व अनि आध्यात्मिक सम्भावनाहरू
फेब्रुअरी 20, 2020
सृष्टिको शुरुवात वैज्ञानिकहरूले भने जस्तो 'बिग ब्याङ्ग' बाट भएको थियो वा त्यो शृङ्खलाबद्ध बिस्फोटहरू बाट भएको थियो, जसलाई योगमा 'रुद्र को गर्जन' भनिन्…